Format ချမရတဲ့ USB Stick တွေကိုပြင်ကြည့်ရအောင် (Repairing Memory Stick) ~ မိုးညိုသား
Format ချမရတဲ့ USB Stick တွေကိုပြင်ကြည့်ရအောင် (Repairing Memory Stick)
8:19 PM နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
Memory Stick တွေ လူသုံးများသလိုပဲ အပျက်လည်း များလှပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက မသိတော့တာ၊ Format ချခိုင်းတာ၊ ဖိုင်တွေ ထပ်ထည့်လို့မရတော့တာ၊ Capacity အပြည့်မရတော့တာ စသည်ဖြင့် ပြဿနာတွေက စုံလှပါတယ်။ အခုတော့ Format ချခိုင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Format ချမရတဲ့ Memory Stick တစ်ချောင်းကို ပြုပြင်နည်းလေးကို ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
သဘောတရားကတော့ Format ချခိုင်းတယ်ဆိုတာက တနည်းအားဖြင့် File System မရှိလို့ပါပဲ။ Format ချလည်း မရတာကတော့ Partition Table က Corrupt ဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် Partition Table ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်၊ ပြီးတော့ File System ပြန်သတ်မှတ်လိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ Software ကတော့ နှစ်ခုတည်းပါ။Test Disk ရယ် Bootice ရယ်ပါ။
No Log ကို Keyboard က Arrow Key နဲ့ ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Hard Disk နဲ့ Memory Stick ရယ် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Memory Stick ကို ရွေးပါ။ Enter ခေါက်ပါ။ နောက်ထပ် သူက Partition Table type ကို ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Intel ကို ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ [Analyse] [Advanced] [Geometry] စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်စရာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲက [Delete] ကို ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Yes/No မေးရင် Y ကို နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Memory Stick ရဲ့ Partition Table ကို ဖျက်ပြီး သွားပါပြီ။
ဒီထိဆိုရင် TestDisk ရဲ့အပိုင်း ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် Bootice ကို Run ပါ။
Perform Format ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့် ပေါ်လာရင် USB-HDD mode (Single Partition) ကို ရွေးပါ။ Next ကို နှိပ်ပါ။ Dialog box ပေါ်လာရင် OK နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Format စရိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Credit To: http://aunglay17.multiply.com
Click Here to Download Bootice (100KB) Click Here to Download TestDisk (1.44MB)
USB Format ချမရရင်အောက်ကနည်းလမ်းတိုင်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်... Scanning for Problems (Windows) 1. Insert the drive into the USB port on the computer. 2. Open My Computer and right click on the Removable Disk Icon. Choose the Properties option. 3. Click on the Tools tab. 4. Click on the Check Now button. 5. Click on both “Automatically fix file system errors” and “Scan for and attempt recovery of bad sectors” check boxes. Click Start. 6. Wait for the scan to complete. Click Close when finished. Now Reformatting the Drive 1. Format with NTFS instead of FAT32. 2. After this, format again with FAT32.
Credit To: http://www.wikihow.com
သို့မဟုတ် ဒီ Tools လေးနဲ့ Format ချကြည့်နိုင်ပါတယ်... Kingston USB drives are pre-formatted withaFAT32 file system for cross platform compatibility and for optimum performance. Formatting this drive with Windows, Mac or Linux may causeaperformance decrease. The solution to obtain the best possible performance is to format the drive with the Kingston utility located below. Note: ALL DATA WILL BE ERASED. Please back up the data stored on the Hyper X drive before using the Kingston Format Utility. Supported Operating Systems: Windows7(SP1), Vista (SP1, SP2) and Windows XP (SP2, SP3)